ချစ်ကြည်အေး: ဆရာကတော် ရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ်
ဆရာကတော် ရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ်
နေ့ လည်း နေ့ အလျောက်
ည ရောက်လည်း ည
ဟိုဒီတစ်စ မြင်မြင်သမျှ ဆွဲထုတ်
ကျုပ်မှာဖြင့် ဖတ်သီ ဖတ်သီ
ဆီ ဆိုလည်း တစက် မကျန်
ဆန် ဆိုလည်း တစ်စေ့ မရှိ
ဒါတွေ.....ရှင့် ရင်ထဲ မငြိပေမဲ့
ကျုပ် အစာအိမ် ထိသတော့်....
ရှင် ရေး ရေးနေတဲ့ ပို့စ်မော်ဒန် ကဗျာ
ရှင် ပြော ပြောလာတဲ့ အဲလဘတ် ငမူး ဆိုလား...
နောက်ထပ် တရက် နှစ်ရက် ကြာလို့မှ
အိမ်အပြန် ငွေမပါခဲ့ ရင်ဖြင့်
ရှင့် အသက် ဖက် နဲ့ ထုပ်
ရှင့် ခန္ဓာ စင်းကော လုပ်လို့
ကျုပ် ကိုယ်တိုင် ကဗျာ တပုဒ်
ရေး ထုတ် လိုက်စမ်းမယ်....
ဘဝ အမောတွေ ပြေကြပါစေရှင်....
မြစ်ကျိုးအင်း Sun Feb 14, 07:36:00 PM GMT+8
ထင်တာတော့ မချစ်ကြည်အေးအတွက် ထုတ်ပြန်တဲ့ ရာဇသံ များလို့ ထင်မိသေး :)
ဝက်ဝံလေး Sun Feb 14, 08:03:00 PM GMT+8
ဟင် မမ အဲလောက်ကြီးမ ရက်စက်နဲ့လေ ဟိဟိ
khin oo may Sun Feb 14, 08:14:00 PM GMT+8
kay Sun Feb 14, 10:16:00 PM GMT+8
မောင်ခိုင်မာ ရဲ့ ရှင်မ ကိုတောင် သတိရသွားပြီ..း)
ကိုချစ်ဖေ Sun Feb 14, 10:25:00 PM GMT+8
လက်စသပ်တော့ မချစ်ကြည်အေးရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ်ကဗျာကိုး...
T T Sweet Sun Feb 14, 11:42:00 PM GMT+8
ဆရာကတော်ရဲ့ ပေါက်ကွဲသံစဉ်းဝ)
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Mon Feb 15, 02:46:00 AM GMT+8
အော်---ရေးတတ်တဲ့ သများ ချစ်ဒေါသကလေးတောင်မှ ကဗျာ တပုဒ်ဖြစ်
Unknown Mon Feb 15, 04:20:00 AM GMT+8
ဒါကမှ တကယ့် ဘ၀သရုပ်ဖော်...
မောင်မိုး Mon Feb 15, 11:14:00 AM GMT+8
ဂျီးဒေါ် စင်းကော သိပ်ကြိုက်တယ်ထင်ပ။
Moe Cho Thinn Mon Feb 15, 12:58:00 PM GMT+8
တဖက်မှည တရားစခန်းဝင်နေပေမဲ့ ဒီဖက်မှာ စင်းကော လုပ်နေပါလား..
နွေဆူးလင်္ကာ Mon Feb 15, 08:36:00 PM GMT+8
အဲလဘတ် ငမူးတဲ့လားဗျာ ဟားဟား
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Tue Feb 16, 07:51:00 AM GMT+8
Nge Naing Tue Feb 16, 12:24:00 PM GMT+8
ပုံရိပ် Wed Feb 17, 11:59:00 AM GMT+8
အဲလဘတ် ငမူး ဆိုတာကို ကြိုက်သွားပြီ။
သက်ဝေ Thu Feb 18, 09:53:00 PM GMT+8
ကျောင်း ဆ ရာ ကြီး . . .
ပြေး ပြီ . . .
အင်ကြင်းသန့် Sun Feb 21, 01:41:00 AM GMT+8
မိုက်တယ်ကွာ...ငါ့အစ်မဆီကနေ ဒါမျိုးလေးတွေ သင်ထားရမယ် :)))
ကိုဇော် Mon Feb 22, 11:08:00 AM GMT+8
ကမ္ဘာမြေရဲ့ တစ်နေရာက ချစ်သူ သိသွားမှဖြင့် အလွတ်ကျက်နေပါဦးမယ်။
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Tue Mar 09, 02:58:00 PM GMT+8
တစ္ဆေ တစ်ကောင်ရဲ့ ပဋိပက္ခ
ကျမ မရှိသော နေ့ရက်များ
အဖြူရောင် စစ်စစ် အချစ် နဲ့ အတ္တများ
ထုံ သွားတဲ့ ည...
ဇကာကြဲကြ သူများ (သို့မဟုတ်) ကြော်ငြာ